Milateriga Soomaaliya oo baaritaan ku haya boqolaal saraakiil ah (Dhageyso Sababta) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Taliyaha milateriga Soomaaliya Jen. Daahir Aadan Cilmi “Indhaqarshe” ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen iney jiraan saraakiil xiran darajooyin been abuur ah oo qaarkood sita dukumiintiyo lagu sameeyey Cabadalle Shadeeye.
Jeneraalka ayaa sheegay in arrintaas loo xilaaray guddi warbixin buuxda ka keena, looga gudbinayo Golaha Wasiirada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Indha Qarshe in la kala shaandheynayo saraakiisha heysata darajooyinka been abuurka, ayna arrintaas go’aan ka gaarayaan labo guddi oo kala duwan.
Tirada saraakiisha xiran darajooyinka been abuurka ayuu Jen. Qarshe ku sheegay ilaa 400. Wuxuu sheegay Indha-qarshe in ciidamada Soomaaliya aysan laheyn saraakiil xigeeno, sidaas dardeetna tabar la siinayo saraakiil xigeeno farabadan.
Halkaan ka dhageyso codka Jen. Indha Qarshe oo ka hadlaya saraakiisha ku shaqeeya darajooyinka been abuurka ah.
Jen. Daahir Aadan Cilmi “Indho Qarshe: ayaa dhan kale beeniyey in qaar ka mid ciidamu ka qeybqaateen dagaalo beeleedyo ka dhacay gobollada dalka.
Taliyaha ayaa Sheegay in laga yaabo Ciidamo ka tirsan Dowlada ay ka qeyb qaateen dagaaladaasi laakiin aysan jirin in dhamaantood ay u shaqeetyaan Qaab qabiil ama u kala saftan Qabiilo kala duwan.
Waxa uu intaasi ku daray in Ciidamada loo soo tababaray difaaca Dalka iyo Dowlada laakiin aan loo soo tababarin qaab qabiil.
Halkaan ka dhageyso codka Jen. Indha Qarshe oo beeninaya in qaar ka mid ah milaterigu ka qeyb qaateen dagaal beeleedyo.
Qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa marar badan ka qeybgalay dagaallo beeleed, iyagoo garab siinaya maleeshiyo beeleedka ku heybta ah.